Amaloota Faayilii Mul'isuu
Amaloota faayilii, kan akka maqaa barreessaa, dhimma, fi jefuraawwan, galmeewwan kee akka taliiguu fi adda baasu gargaara. Akkasumas LibreOffice xiinannoo faayilii faana bu'a, lakkoofsa jechootaa fi lakkoofsa fuulota galmee keessaa dabalatee, akkasumas xiinannoo akka qaama amaloota faayiliitti ofumaan ida'a.
Amaloota faayilii kan galmee ammee mul'isuu ni dandeessa ykn galmee kan Qaaqaa Faayilii Bani Windows keessaa.
Amaloota faayilii kan galmee ammee mul'isuuf:
Faayilii - Amaloota fili.
Amaloota faayilii galmee kan qaaqaa faayilii bani Windows keessatti tarreefaman muli'suuf
Tarree keessaa faayilii fili.
Mirga cuqaasiiti Amaloota fili.
Title is: Amaloota Faayilii Mul'isuu